Toekarena sy Fandraharahàna · Septambra, 2021 · Global Voices teny Malagasy
Toekarena sy Fandraharahàna · Septambra, 2021
Tantara mikasika ny Toekarena sy Fandraharahàna tamin'ny Septambra, 2021
Azia Atsimo 28 Septambra 2021
Satria miakatra ny vidin'ny lasantsy sy ny gazoala, dia mitombo koa ny tinady, saika mitarika amin'ny fiakaram-bidim-piainana tokoa, fanampin'izany ny vesatra ara-bolan'ny vahoaka noho ny tsy fananana asa sy ny valan'aretina.
Azia Afovoany sy Kaokazy 24 Septambra 2021
Talohan'ny nandonan'ny COVID-19 an'i Armenia, nilaza i Avetisyan fa ireo andiam-panorenana sy asa isan'andro no mamelona ny fianakaviany hihinana sy hanam-pialofana.
Eoropa Afovoany & Atsinanana 24 Septambra 2021
Tamin'ny volana Jona 2021 ny hafanan'ny ranomasina dia nampitombo ho 28 degre Celsius ny maripana ankapobeny amin'ny Ranomasina Egée, izay nitombo 4 degre ambony kokoa noho ireo taona teo aloha.
Eoropa Afovoany & Atsinanana 22 Septambra 2021
Nosakanan'ny mpanakana ny Antijob, angondrakitra an-tserasera misy ireo fitarainana tsy mitonona anarana momba ireo Rosiana mpampiasa, taorian'ny raharaha fanalam-baraka nanaovan'ny orinasa mpivarotra trano sy tany iray ao Moskoa fitarainana.
Azia Afovoany sy Kaokazy 19 Septambra 2021
Tolotra taksy vaovao any Zeorzia, antsoina hoe TaxiWoman no mampanantena dia azo antoka satria natokana ho an'ny vehivavy irery ihany izany miaraka amin'ny mpamily vehivavy.
Eoropa Afovoany & Atsinanana 17 Septambra 2021
Nilaza i Drew Sullivan, mpiara-manorina sady lehiben'ny fanoratana OCCRP, fa "manimba kokoa fa tsy manasoa" ireo mpitati-baovao ao Rosia ny asan-dry zareo ao anatin'ny faritra rosiana.
Vavahadin-tserasera aterineto ao Kambodza, mety hanamafy ny fanarahamaso sy ny sivana
Azia Atsinanana 06 Septambra 2021
"...ny fanarahamaso ataon'ny governemanta dia mamboly tontolo anjakan'ny tahotra, manosika ho amin'ny fanivanantena ary manohintohina mivantana ny fahafahan'ireo mpanao gazety sy mpiaro ny zon'olombelona tsy ho afaka hanao antsakany sy andavany ny asany."